China 12W Bright LED Floor Lamp Manufacture and Factory |Chaoqun
1. Ny fampiasana jiro LED bead ho loharano maivana, raha ampitahaina amin'ny jiro incandescent nentim-paharazana miaraka amin'ny jiro, ny hazavana dia miorina kokoa, tsy misy flicker, afaka miaro tsara ny maso.Amin'ny lafiny iray, ny jiro LED dia mamoaka hafanana kely ary azo ampiasaina mandritra ny ora maro tsy misy hafanana.
2. Ampiasao ny bokotra fanosehana switch, HI-OFF-Low switch, 2 ambaratonga famirapiratana fanitsiana, mba hihaona amin'ny filan'ny sehatra isan-karazany, toy ny famakiana, torimaso, makiazy.High - hazavana mamirapiratra dia mety amin'ny famakiana miasa ect.jiro asa.Ny jiro manjelanjelatra ambany dia mety amin'ny toe-tsaina milamina.
3. Amin'ny alalan'ny fanitsiana ny flexible gooseneck, na ianao mipetraka eo amin'ny fandriana mamaky gazety na mamaky tantara eo am-pandriana, dia azonao atao ny mametraka ny jiro amin'ny zoro rehetra tianao.
4.50000h lava androm-piainany, amin`ny endriky ny fampiasana ny mahazatra rihana jiro modeling, mateza ary tsy lany andro.Apetraho ao amin`ny efitra fatoriana, efitra fandraisam-bahiny, birao sy ny toerana hafa ilainao dia safidy tsara.
5. Mba hahatonga azy ho azo antoka kokoa ho anao ny fampiasana, dia nametraka fototra mavesatra ho an'ity jiro gorodona ity izahay.Weighted base dia miantoka fa Tsy misy olona, ​​anisan'izany ny ankizy na ny biby fiompy handondona azy mora foana.
6.Fanompoana lavorary aorian'ny varotra: Manolotra fiantohana 1 taona feno izahay.Izany dia mandrakotra raha mijanona ny vokatra ao anatin'ny 1 taona na raha misy lesoka ao anatin'ireo 1 taona ireo.
Boaty mailaka volontany namboarina:31*40.5*14.5CM
52*32*39.5CM (3pcs / ctn);15KGS
Azo ampiasaina amin'ny toerana maro izy io, toy ny efitra fandraisam-bahiny, efitrano fatoriana, birao, Studio, sns, rehefa mamaky na manjaitra ianao, azonao atao ny mametraka ny fitoeran-jiro eo ambonin'ny lohalinao, hitondra anao ny hazavana malefaka mamirapiratra.
teo aloha: Mpanamboatra jiro fanaraha-maso Romote tsara indrindra any Shina - Jiro gorodona 2 amin'ny 1 5X & Jiro gorodona - Chaoqun
Manaraka: Touch Control Stepless Dimming LED Floor Lamp